JIANGXI JINGYE MACHINERY TECHNOLOGY CO., LTD. dia orinasa tsy miankina teknolojia avo lenta izay miahiahy amin'ny fikarohana ara-teknika sy ny fampandrosoana, famolavolana injeniera, fanamboarana fitaovana ary fametrahana. Ary ny firesahana ny hevitra famolavolana ny fiarovana ny tontolo iainana, fiarovana ny tontolo iainana ary ny angovo, dia nitarika ny fahatongavana ho mpamatsy sakafo, zava-pisotro, biolojika, simika, fitaovana fanafody ary angovo vaovao, fitaovana fampitaovana fibre optika.
Ny orinasanay dia mivondrona talenta matihanina an-trano maro izay mahay milina, injeniera, teknolojia, saha fanaraha-maso mandeha ho azy. Ary manatsara hatrany ny fifaninanana ifotony amin'ny alàlan'ny fikarohana tsy miankina sy ny fanavaozana ny teknolojia fampandrosoana.
Hatramin'ny 2010, Jingye dia nanome fitaovana, fampiofanana ary torohevitra tsara ho an'ny indostrian'ny serivisy sakafo sy ny famokarana sakafo. Ny filozofianay dia ny manolotra fitaovana miaraka amina serivisy fanampiny.
Satria ny rafitra mazava no fototry ny fitantanana mahomby, ny mpiasa tsirairay dia mahatsapa ny andraikiny manokana amin'ny mpanjifantsika.
Ity fomba fahandro fahombiazana ity dia nahatonga antsika hanana laza miavaka eo amin'ny sehatry ny indostrian'ny sakafo sy zava-pisotro tato anatin'ny 11 taona. Ny anarana Jingye dia midika hoe teknolojia miavaka sy serivisy tena tsara.
Jingye dia manolo-tena hanome mpanjifa fitaovana tsara kalitao indrindra, fantatray fa raha tsy misy ny fanohanana ara-teknika tsara, na ny olana madinidinika aza dia mety hahatonga ny tsipika famokarana mandeha ho azy tsy hiasa intsony. Noho izany, afaka mamaly haingana sy mamaha olana izahay rehefa manome serivisy mialoha, varotra ary serivisy aorian'ny varotra ny mpanjifa. Izany koa no antony ahazoan'ny Jingye mibodo ny tsena lehibe indrindra any Shina ary mitombo hatrany.
Mba hahatongavana ho marika voalohany amin'ny indostrian'ny milina fanodinana sakafo sy zava-pisotro eran-tany dia tanjon'ny Jingye olona, ​​manana injenieran'ny mekanika za-draharaha sy mahay, injenieran'ny famolavolana ary injenieram-pampandrosoana lozisialy elektrika izahay, tanjonay sy adidinay ny manome ny mpanjifanay ny tsara indrindra vokatra, serivisy ary tontolon'ny asa. Tianay ny zavatra ataonay, ary fantatray fa ny lanjanay dia miankina amin'ny fanampiana ireo mpanjifantsika hamorona lanja. Mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny mpanjifa samy hafa dia manohy manavao hatrany izahay, mamolavola ary mamolavola vahaolana namboarina ho an'ny mpanjifa.